Amakhadi e-Nitrate Crystals
I-nitrate ye-sodium yinto eqhelekileyo yeekhemikhali, etholakala ukutya, isichumisi, i-glass eamel kunye ne-pyrotechnics. I-nitrate ye-sodium, i-NaNO 3 , ibeka iikristal ezingenambala ezingaqhelekanga . Nangona ezi kristal zinzima kunzima ukukhula kunezinye ze-crystals zokuqala, isakhiwo se-crystal esithakazelisayo senza ukuba bafanele umzamo. I-crystal ifana ne-calcite, ibonisa ezinye zeepropati ezifanayo. Iikristali ze-nitrate ze-sodium zingasetyenziselwa ukuhlolisisa ngokuphindaphinda kabini, ukucoca kunye ne-glide.
Isisombululo Sokwanda Kwe-Crystal Nitrate
Qala ulungiselele isisombululo esiphezulu.
Dissolve i-110 grams ye-nitrate nganye nge-100 ml yamanzi ashushu. Oku kuya kuba yisisombululo esiphezulu. Enye indlela yokukhula kwamakristal kukuvumela ukuba isisombululo sipholise kwindawo engaphazamiseki kwaye sivumele ukuba kuveliswe amakhemiksi njengoko i-liquid ephuphuma.
Enye indlela yokwandisa le crystal kukukhuphula i-crystal enye echaziweyo equlethwe kwisisombululo esiphezulu. Ukuba ukhetha ukulandela le ndlela, lungiselela isisombululo esichazwe ngasentla, vumela ukuba isisombululo sipholile, kwaye ungeze iibini ze-nitrate ye-sodium kwaye unamathele isitya. I-nitrate ye-sodium eyongeziweyo iya kufakwa kwi-grains, ivelise isisombululo se-nitrate egcweleyo. Vumela iintsuku ezimbalwa ukuba oku kwenzeke.
Phalaza isisombululo esipheleleyo. Phala ixabiso elincinane lesisombululo kwisitya esingenanto. Vumela umbane ukuba uphuphuke, ukuvelisa iikristal ezincinci zembewu. Khetha i-crystal okanye ezimbini ukukhula okuqhubekayo.
Ukulungiselela isisombululo esikhulayo esiphezulu, kwisisombululo sakho esele sinezele igramu ze-nitrate ye-sodium nge-100 ml yamanzi kwisisombululo sokuqala. Ngoko, ukuba ulungiselele i-300 ml yesisombululo, ungongeza i-9 grams ye-nitrate ye-sodium.
Yongeza ngokucophelela i-crystal yakho yembewu kulolu lwakhiwo. Unokumisa i-crystal kwi-monofilament ye-nylon. I-monofilament ye-nylon okanye i-wire isetyenziswe kuba ayiyi kusisombulula isisombululo, ebangela ukukhuphuka kwamanzi.
Gcoba ingqungquthela kwaye uvumele ukuba iikristali zikhule ngexesha lokushisa rhoqo, endaweni ethile abayi kuphazamiseka. I-nitrate ye-sodium iyanqabisa kakhulu utshintsho lokushisa, ngoko ke ukugcina ubushushu obusoloko kubalulekile. Ukuba unobungozi bokugcina ubushushu, ungayifaka ingxowa ebhaliweyo ngaphakathi kubhedi lwamanzi. Ukuba awuboni ukukhula kristall emva kweentsuku ezimbalwa, zama ukunciphisa ubushushu.
Indlela yokukhulisa i-Crystal yeMbewu
Indlela Yokwenza I-Sodium Carbonate Kwi-Sodium Bicarbonate
Indlela yokusebenzisa i-French Adverbial Phrase 'All à Fait'
Ukuqonda iiNgxenye zeBhodi Yakho yamandla